Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Narcotic Analgesics မူးယစ်ဆေးပါ အနာသက်သောဆေးများ
Narcotic Analgesics မူးယစ်ဆေးပါ အနာသက်သောဆေးများ
မူးယစ်ဆေးပါတဲ့ အနာသက်သောဆေးတွေက (၂) မျိုးရှိတယ်။ Opiates ဘိန်း နဲ့ Opioids ဘိန်းနဲ့ဆင်တာ ဖြစ်တယ်။
Opioids ဘိန်းပါတဲ့ဆေးက (၄) မျိုးရှိတယ်။
1. Endogenous opioid peptides ကိုယ်ခန္ဓာကနေ အလိုလိုထုတ်ပေးနေတာမျိုး။ ဒါထဲမှာ Endorphins, Dynorphins, Enkephalins တွေပါတယ်။
2. Opium alkaloids (အယ်လ်ကာလွိုက်) Morphine, Codeine, Thebaine တွေဖြစ်တယ်။
3. Semi-synthetic opioids တစိတ်တပိုင်း ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ဖေါ်စပ်တာမျိုး။ Heroin, Oxycodone, Hydrocodone, Dihydrocodeine, Hydromorphone, Oxymorphone, Nicomorphine တွေဖြစ်တယ်။
4. Fully synthetic opioids လုံးဝ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာသာ ဖေါ်စပ်တာမျိုး။ Demerol, Methadone, Fentanyl, Propoxyphene, Pentazocine, Buprenorphine, Butorphanol, Tramadol တွေဖြစ်တယ်။
• Oxycodone ဆေးဟာ ပြင်းတယ်။ စွဲတယ်။ နာတာရှည် မခံနိုင်အောင် နာနေသူတွေအတွက် သောက်ဆေး ဖြစ်တယ်။ OxyContin နာမည်နဲ့ 5, 10, 20, 40, 80, and 160 mg ဆေးပြားတွေ လာတယ်။ ၈-၁၂ နာရီအထိ ဆေးစွမ်းရှိတယ်။
• Morphine (မော်ဖိန်း) ဆေးဟာ ပြင်းတယ်။ စွဲတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကတော့ စိတ်ရဲ့ ပုံမှန်အလုပ်တွေ ပျက်ယွင်းမယ်၊ ကောင်းတာတွေချည်း ထင်မြင်နေမယ်၊ အိပ်ချင်မယ်၊ မလှုတ်ချင်ဘဲ ငြိမ်နေမယ်၊ မျက်စိ ဝေဝါးနေမယ်၊ ဝမ်းချုပ်မယ်။
• Tramadol ဆေးဟာ ပြင်းတယ်။ စွဲတယ်။ စားဆေး၊ ထိုးဆေးရှိတယ်။ Morphine (မော်ဖိန်း) အစွမ်းရဲ့ ၁ဝ% ရှိတယ်။ စားဆေးဆိုရင် တနေ့မှာ 50–400 mg ပေးပြီး ထိုးဆေးဆိုရင် တနေ့မှာ 600 mg IV/IM ပေးတယ်။
• Codeine (ကိုဒင်း) ဆေးကို Acetaminophen နဲ့ ရောသုံးတာများတယ်။ Tylenol, Tylenol with Codeine, Empirin and Phenaphen with Codeine နာမည်တွေနဲ့ရောင်းတယ်။ Aspirin နဲ့လဲ တွဲတာ ရှိတယ်။
• Darvocet ကိုလဲ တွဲလာတယ်။ Propoxy နဲ့ Acetaminophen တွဲတာကို Propacet, Wygesic နာမည်နဲ့ ရောင်းတယ်။
• Propoxyphene ဆေးကို Acetaminophen နဲ့တွဲပြီး Darvon and PP-Cap နာမည်တွေနဲ့ လာတယ်။ ဆေးပြား၊ ဆေးတောင့် နဲ့ ဆေးရည်တွေ ရောင်းတယ်။
• Duragesic ဆေးကို အရေပြား ဆေးကပ်ခွါအနေနဲ့ ရောင်းတယ်။ Generic နာမည်က Fentanyl ဖြစ်တယ်။
• Marijuana (မာရီဂွါးနား) ဆေးခြောက်၊ ဆေးကုရာမှာ သုံးသင့်-မသင့် ငြင်းနေကြတယ်။ နာတာလဲ သက်သာတယ်၊ အစာလဲ စားချင်မယ်၊ ပန်းနာ နဲ့ (မိုင်ဂရင်း) ရောဂါ၊ မျက်စိရေတိမ်၊ (မာလ်တီပယ်-စကယ်လရိုးဆစ်) ရောဂါတွေအတွက်ပါ သုံးနိုင်တယ်။ ဆေးစွဲတယ်။ ဆေးဖြတ်ရင် ပျို့တာ၊ အန်တာ၊ အိပ်မရတာ နဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေဖြစ်မယ်။
Opioids ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကတော့
ပျို့၊ အန်၊ အိပ်ချင်၊ ဆီးအိမ်တင်း၊ သူငယ်အိမ်ကျဉ်း၊ နှလုံးခုန်နှေး၊ နှလုံးခုန်မြန်၊စိတ်ရှုတ်ထွေး၊ သူများ မမြင်မကြားတာတွေ ထင်မြင်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ယား၊ ဂယောက်ခြောက်ခြားဖြစ်၊ ခေါင်းထဲဖိအားတက်၊ အရေပြားအနီကွက်တွေထွက်၊ ကိုယ်အပူချိန်ကျ၊ ကြွက်သားတွေတင်း၊ အသက်ရှူမကောင်း၊ ဆေးလွန်ရင် သေဆုံး။
- Painkillers အနာသက်သာဆေးများ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/06/painkillers.html